एनटीसीमा आजबाट एचडी भ्वाइससहितको नयाँ सेवा, कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ ? — Jana Garjan
एनटीसीमा आजबाट एचडी भ्वाइससहितको नयाँ सेवा, कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ ?
भिओ एलटिई सेवा प्राप्त गर्न मोबाइलमा *४४४# डायल गर्नुपर्छ । त्यसपछि आउने निर्देशनअनुसार यो सेवा एक्टिभ गराउन सकिन्छ । त्यसपछि मोबाइलको सेटिङमा गएर भिओ एलटिई कल फर एनटिसी सिम समेत इनेबल गर्नुपर्छ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै प्रकारका सिममा भिओ एलटिई सेवा प्राप्त हुन्छ । तर यो सेवा सपोर्ट गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा तपाईंको मोबाइल सेटमा भर पर्छ।
हाललाई सामसुङ, शाओमी र नोकिया ब्राण्डका निश्चित मोडेलहरुमा यो सेवा उपलब्ध छ । भ्वाइस ओभर एलटिई सेवा एक्टिभ हुने मोबाइलका मोडेलहरु यी हुन् :